Sebenzisa umhumushi osheshayo wetolika: I-Smartphone noma amadivayisi ukuthenga i- ulator Emulator.online ▷ 🥇
Lapho sivakashela phesheya, inkinga enkulu ngokungangabazeki ulimi lwangaphandle: yize manje wonke umuntu ekhuluma isiNgisi esincane, singakuthola kunzima ukuzenza siqondwe ngabomdabu bendawo, ikakhulukazi uma bekhuluma okwabo kuphela. ulimi. Ngenhlanhla, ubuchwepheshe bokuhumusha buhambe ibanga elide eminyakeni yamuva futhi kungenzeka, ngamadivayisi amancane aphathekayo, thola ukuhumusha okusheshayo nokusheshayo ngenkathi siqala ingxoxo.
Kulo mhlahlandlela sizokukhombisa ngempela abahumushi abasheshayo abahamba phambili ukuthi ungathenga ku-inthanethi ukuze ukwazi ukukhuluma nokuhumushela olimini lwasekhaya futhi okuphambene nalokho ulalele izingxoxo zabasingenisi bethu futhi uqonde igama ngalinye elishiwoyo. Lawa madivayisi awusizo kakhulu futhi ayasebenziseka futhi angasetshenziselwa noma iluphi uhambo oluya phesheya.
FUNDA NONKE: Uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lwesichazamazwi nomhumushi we-Android ne-iPhone
Abahumushi abasheshayo abahamba phambili
Abahumushi abasheshayo banezinhlobonhlobo zezinto ezisebenzayo futhi, ngaphambi kokuthenga imodeli yokuqala esiyithola ngokushesha, ngaso sonke isikhathi kufanelekile ukubheka izici lawa madivayisi okufanele abe nazo, ngakho-ke khetha kuphela amamodeli alungele izidingo zethu. izidingo zokuhumusha.
Umhumushi wendima yesikhathi sangempela
Umhumushi osheshayo omuhle kufanele abe nalezi zici ezilandelayo ukuze achazwe kanjalo futhi akwazi ukuphendula kuzo zonke izidingo zethu zokuhumusha:
Izilimi ezisekelwayo- enye yemingcele ebaluleke kakhulu, njengoba kukhona abahumushi abaningi abahlukahlukene abasheshayo abakhona futhi kufanele sikhethe eyodwa esekela okungenani izilimi noma izilimi ezithandwa kakhulu esingaba nezinkinga nazo lapho siphesheya. Ngakho-ke asiqiniseke ukuthi isekela isiNgisi, iSpanishi, isiFulentshi, isiRashiya, isiShayina, isiJapane, isiHindi nesiPutukezi.
Izindlela zokuhumusha- Ngaphezu kwezilimi ezisekelwayo, masiqiniseke ukuthi umhumushi osheshayo okhethiwe unezindlela ezahlukahlukene zokuhumusha. Okulula ukuhumusha okuqondile (kusuka olimini A kuye olimini B noma okuphambene nalokho), kanti amamodeli abiza kakhulu futhi athuthukile avumela ukuhumusha okusheshayo ngezilimi ezimbili ezihlukile, ngaphandle kokucindezela izinkinobho noma ukusetha izilimi ngaphambi kwengxoxo (ukuhumusha okuya ngakubili) .
Conectividad: ukuze sikwazi ukuhumusha kahle futhi ngokushesha, iningi labahumushi abasheshayo kumele lixhumeke kwi-Intanethi, ukuze lisizakale ezinjinini zokuhumusha eziku-inthanethi kanye nobuhlakani bokuzenzela obenziwe abenzi bale mishini. Izinhlobo ezilula zixhuma ngeBluetooth ziye kwi-smartphone (okumele ngabe ngaso sonke isikhathi zixhunywe kwi-Intanethi), kanti ezinye izinhlobo ezibiza kakhulu zine-Wi-Fi, iBluetooth neSIM khadi ezinikele ukuze zikwazi ukuxhuma ngokuzimela kunoma yisiphi isimo.
Ukuzimela: Njengoba kungamadivayisi aphathekayo, anebhethri langaphakathi le-lithium-ion, elikwazi ukuqinisekisa okungenani amahora angu-5-6 wokuhumusha ngaphambi kokulandwa unomphela. Kulokhu, kubalulekile ukuthi uhlale uphethe ishaja ye-USB ehambisanayo noma, njengoba siphesheya, futhi nebhange lamandla losayizi owenele (njengalezo ezibonwe kumhlahlandlela Ungayigcina kanjani i-smartphone yakho ishajiwe njalo).
Usayizi nokuma- Ukuma nosayizi womhumushi nakho kubaluleke kakhulu, njengoba umhumushi osheshayo kufanele kube lula ukukubamba futhi kube lula nokuvula nokuvala lapho kudingeka. Yize amadivayisi ahlukahlukene anezimo ezahlukahlukene atholakala, sihlala sizama ukukhomba amamodeli ane-ergonomic shape (ngendlela yamarekhoda wezwi).
Uma amadivayisi ehlonipha lezi zici, singakwazi ukuwaqondisa ngamehlo ethu avalekile, siqinisekile ngomphumela omuhle.
Ngemuva kokubona ukusebenza okufanele abahumushi abasheshayo babe nakho, ake sibheke ndawonye ukuthi yimaphi amadivayisi esingawathenga ku-Amazon, ebilokhu ingesinye sezilinganiso zezentengiselwano ze-elektroniki eziku-inthanethi ngenxa yesiqinisekiso sayo esigcwele, esibuye sakhuluma ngaso kumhlahlandlela . Isiqinisekiso sase-Amazon sibuyisela imali esetshenziswe kungakapheli iminyaka emibili.
Phakathi kwabahumushi abancane nabashibhile osheshayo sithola i- UTravis Touch Go, itholakala ku-Amazon ngemali engaphansi kuka- € 200.
Le divayisi ingahumusha izilimi eziyi-155 ngemodi yokubhida (ngezihumusho ezitholakala ngaphansi kwesekhondi), ine-Wi-Fi, iBluetooth nedatha yenethiwekhi (nge-eSIM) futhi, uma ixhunywe kwi-Intanethi, isebenzisa ubuhlakani obuthuthukile. uhlobo lwamafu lokuzenzela ukusisiza ngezihumusho ngesikhathi sangempela. Lo mhumushi uhambisana nesikrini sokuthinta esingu-2,4-intshi kanye nezinkinobho eziningi zomsebenzi ukukhetha ulimi ozohumusha ngalo.
Omunye umhumushi osheshayo omuhle esingamcabangela yi Umhumushi we-Smart Vormor, itholakala ku-Amazon ngemali engaphansi kuka- € 250.
Le divayisi inesimo se-ergonomic ne-compact, isibuko sombala esingu-2.4-intshi kanye nekhamera yangemuva, ukuze sikwazi ukubiyela nokuhumusha ngisho namaphosta nemiyalezo esingayithola emigwaqweni yezwe langaphandle. Ngenxa yoxhumano olungenantambo, kuvumela ukuhumusha okusheshayo nokubhangayo kwezilimi ezifika kwezingu-105, ngokunemba okunomona ngempela.
Uma, ngokuphambene nalokho, sifuna abahumushi abasezingeni eliphakeme abagcinelwe amaklayenti ebhizinisi, ithuluzi lokuqala okufanele licatshangwe yi- IVasco Mini 2, itholakala ku-Amazon ngemali engaphansi kuka- € 300.
Idizayini ikhumbuza isizukulwane esedlule i-Apple iPod Minis, futhi ukuthwala kalula, ibuye iza necala elinethezekile, ngakho-ke ungahlala uthwala nathi ngaphandle kokwesaba ukulimala noma ukulahleka. Njengomhumushi, isekela izilimi ezingafika kwezingu-50, inikela ngemodi yokuhumusha yamabhidi womabili futhi ingaxhuma kunoma iyiphi inethiwekhi yedatha yeselula mahhala, noma kuphi emhlabeni (sibonga izivumelwano zokuzulazula zomkhiqizi, eziqinisekisa ukufinyelela nge-LTE).
Uma, ngokuphambene nalokho, sifuna okokusebenza okuhambisanayo nokusebenzayo kwezindlela ezimbili njengamahedifoni, singagxila kumkhiqizo ophezulu. I-WT2 Plus, itholakala ku-Amazon ngemali engaphansi kuka- € 200.
Lawa ma-headphone akhumbuza ama-Apple AirPods kepha asebenza njengabahumushi bezindlela ezimbili nabajwayelekile, okuhambisana nohlelo (oluzofakwa kuselula yethu). Uma usuxhumene nohlelo lokusebenza lokuhumusha oluzinikele, okumele ukwenze nje ukudlulisa i-handset kumxhumanisi wethu bese uqala ukukhuluma nenye into ephathekayo: singakhuluma ngolimi lwethu, omunye umuntu uzosiqonda nakanjani, futhi sikwazi ukuqonda konke. uthi. Lo mhumushi omangalisayo ophathekayo uhumusha kuze kufinyelele ezilimini ezihlukene ezingama-40 nezindlela zokukhuluma ezingama-93, ngakho-ke ungaqonda futhi izingxoxo zezindawo ezithile zezwe elikhethiwe.
Sebenzisa i-smartphone yakho njengotolika wesikhathi sangempela
Ngaphandle kokuthenga noma yini, ungasebenzisa futhi i- Imodi yokutolika yesikhathi sangempela se-Google Translate ubani isikhathi futhi kuhlanganiswe kumsizi we-Google manje isiyatholakala kumadivayisi we-Android ne-iPhone. Ukuhumusha kusekela izilimi ezingama-44 ongakhetha kuzo, kufaka phakathi i-Arabic, English, French, German, Greek, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish, and many more. Uma imodi yotolika seyenziwe yasebenza, ungamane ukhulume kudivayisi ukuze ukuhumusha kuboniswe esikrinini futhi kufundwe ngokuzwakalayo umsizi we-Google, ukuze ukwazi ukuxoxa nabantu abakhuluma izilimi ezahlukene.
Uyisebenzisa kanjani imodi yokutolika yomsizi weGoogle
Efonini yakho, vula umsizi we-Google ngokuthi "Ok Google" noma ngokuvula uhlelo lokusebenza lwe-Google nangokuthepha inkinobho yemakrofoni kubha yokusesha. Ukuze uqale imodi yokutolika, vele uthi "Sawubona Google, yiba ngutolika wami waseRussia"noma ulimi olufunayo. Ungasebenzisa futhi neminye imiyalo yezwi efana nale:"Ngisize ngikhulume iSpanishi"noma"Ukuhumusha kusuka eRomania kuya kwisiDashi"Noma kalula:"Umhumushi waseFrance"NOMA"Yenza kusebenze imodi yotolika".
Isilekeleli sizobe sesikucela ukuthi uthephe inkinobho yemakrofoni bese uqala ukukhuluma. Esikrinini ungafunda ngokushesha ukuhumusha nochungechunge lwezimpendulo ngolimi oluhunyushiwe ukuze uqhubeke nokuxoxa kahle.
Kuze kube yiminyaka embalwa eyedlule, abahumushi bendawo yonke babeyizindaba eziqanjiwe zesayensi, kanti namuhla bathengwa kalula e-Amazon futhi basebenza kahle, besisiza ukuba sinqobe umgoqo wolimi lapho sivakashela phesheya.
Njalo ngendaba yabahumushi, sincoma ukuthi nawe ufunde umhlahlandlela wethu Ungamsebenzisa kanjani umhumushi wezwi futhi uhumushe ngasikhathi sinye.
Ngabe sifuna umhumushi wezindlela ezimbili weSkype? Singasebenzisa umhumushi ohlanganisiwe, njengoba kubonakala nakwisiqondisi sethu. Umhumushi weSkype njengesitolika esizenzakalelayo somsindo engxoxweni yezwi neyevidiyo.
Uyidlala kanjani imidlalo yePS5 ngaphandle kwekhonsoli
Izesekeli ezibalulekile eziyi-7 zomsebenzi ohlakaniphile
Izindlela eziningi zokusebenzisa iMac Mini efana ne-PC, i-TV Box ne-NAS
Injani iPS5? ukuhlaziywa kanye nomhlahlandlela we-Playstation entsha
IHuawei vs Xiaomi: ngubani owenza ama-smartphones amahle kakhulu?
Ama-PC amahle kunawo wonke athatha isikhala esincane
Ungayikhetha kanjani ikhompyutha yakho esikoleni noma ekolishi
Izibuko ezinomsindo we-bluetooth, izibuko zelanga hhayi
Ama-PC amahle kakhulu wedeskithophu ongawathenga ngaphandle kwebhokisi